ကိုရီးယားကို လာချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုပဲလာရလာရ ဆိုသူများဖတ်ပါ – media sport
Homeသတင်းကိုရီးယားကို လာချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုပဲလာရလာရ ဆိုသူများဖတ်ပါ
ကိုရီးယားကို လာချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုပဲလာရလာရ ဆိုသူများဖတ်ပါ
[Zawgyi]ကိုရီးယားကို လာချင်လွန်းလို့ ဘယ်လိုပဲလာရလာရ ဆိုသူများဖတ်ပါ
တောင်ကိုရီးယားရောက်ဖူးချင်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးထိုင်းရုပ်ရှင် နဲ့ ထိုင်းအဆိုတော်တော်တွေ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော်လောက်ကစပြီး KPOP နဲ့ တောင်ကိုရီးယား ဒရမ်မာတွေခေတ်စားလာခဲ့တယ်။
KPOP ထဲက အဆိုတော်အကိုကြီးတွေ ဒရမ်မာထဲက ရုပ်ရှင်မင်းသားချောချောတွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမိတဲ့ ( fan ) ဖန်တွေအထဲမှာ ၁၀ ကျော်သက် ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး တစ်ယောက်လည်းပါခဲ့တာပေါ့..။
၂၀၀၄ ခုနှစ် ကမ္ဘောဒီးယား TV မှာပြသသွားတဲ့ Rain နဲ့ Son Hye Kyo တို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “Full House” ဆိုတဲ့ အခန်းဆက် ဒရမ်မာ ဟာ သူမကို ပိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်စေခဲ့တယ်။
အို…တောင်ကိုရီးယားက အကိုတွေချောလည်းချော ချစ်လဲချစ်တတ်ပါဘိ…။
သူမ တောင်ကိုရီးယားကိုရောက်ဖူးချင်တယ်။သူမနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့ နှင်းတွေကို မြင်ဖူးချင်တယ်။သူမ ကိုရီးယားစကားတွေလည်း ပြောတတ်ချင်တယ်။
သူမဟာ ကိုရီးယား မိန်းကလေးတွေကိုတုပြီး ဝတ်စားဆင်ယင်ရတာလည်းအမော…..။
ကမ္ဘောဒီးယား မြို့ပေါ် စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ရောင်းတဲ့ တောင်ကိုရီးယားက မိတ်ကပ်တွေ ဈေးကြီးလွန်းလို့မဝယ်နိုင်….။
ငေးပြီးပြန်လာရတိုင်း သူမ ဒီလိုတွေးတယ်…။
” အင်း…တစ်နေ့နေ့…ငါ ဒီလိုမိတ်ကပ်တွေလှလှလေးလိမ်းပြီး ငါချစ်တဲ့ အဆိုတော်တွေနဲ့ ခင်ခင်မင်မင် တရင်းတနှီး စကားပြောခွင့်ရရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲ…”
သူမ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်တယ်..။ ပြီးတော့သူငယ်ချင်းအကူအညီနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသွားပြီး သူမနာမည်နဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို သွားပေးလိုက်တယ်။
အဲဒီ သူငယ်ချင်းကြောင့် ဒီနည်းလမ်းကိုသိခဲ့တာပေါ့…။
” ငါ့အသိတစ်ယောက် ကိုရီးယားလူမျိုးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တာ… အတော် အဆင်ပြေတယ်တဲ့….ကိုရီးယားမိသားစုက အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲတဲ့…”
အဲဒီတုန်းက သူမ အသက် ၁၇ နှစ်…။ကလေးပီပီ သူမ ဒီလိုတွေးလိုက်တယ်..။
“ငါ.. တောင်ကိုရီးယားလူမျိုးနဲ့လက်ထပ်မယ်…ငါ ကချောတော့ အဆိုတော်တွေနီးပါးချောတဲ့ အိုးပါးတွေ လက်ထပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းမှာပဲ….”
သူမတို့ သွားခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီက သတို့သမီးအလိုရှိနေတဲ့ ကိုရီးယားအမျိုးသားတွေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူတွေကို အောင်သွယ်ပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါ့..။
ဖူးစာ ကိုကိုနဲ့ မြန်မြန်တွေ့ရပါစေ… သူမ ဆုတောင်းတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့ သူမဘဝမှာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးကိုရောက်ဖို့ဆိုတာ ဒီနည်းကလွဲပြီး ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ သူမထင်ထားခဲ့မိတာပေါ့..။
မကြာခင်မှာပဲ ကုမ္ပဏီက အကြောင်းကြားလာတယ်… ဖူးစာရှင်တွေ့ပြီတဲ့…။
သူမ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာ အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေနဲ့ဆင်တဲ့ အိုးပါး….။
လက်တွေ့ သူမကို ရွေးချယ်တာက အသက် ၄၀ နီးပါးရှိတဲ့ ကိုရီးယား ဦးလေးကြီး ရီ ** တဲ့…..။
ဓာတ်ပုံကြည့်လိုက်တော့ ဦးလေးကြီးက နုလိုက်တာ….။ ဆယ်ကျော်သက် ကမ္ဘောဒီးယား အမျိုးသားတွေလောက်တောင် နုပျိုနေတယ်။
အခြား ကိုရီးယားအမျိုးသား ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ယှဉ် ကြည့်တော့ ဦးလေးကြီး ရီ က အချောဆုံးပဲ..။
အင်း … မဆိုးပါဘူး…။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ သူမ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ လမ်းစတစ်ခု ရလာတယ်။**************************************
ဒါပေမဲ့..အောင်သွယ်ပွဲစားက တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ..။
” ဪ… မေ့နေလို့ …သူက ကလေး အဖေ မုဆိုးဖိုနော်…”
အသက် ၁ရနှစ်ကျော်ရုံ ရှိသေးတဲ့ သူမက အသက် ၁၀ နှစ်နီးပါးရှိတဲ့ကလေးရဲ့အမေ လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ သူမ ကြောက်လန့်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့..အောင်သွယ်တွေက အပြောကောင်းကောင်းနဲ့ ဖျောင်းဖျလို့ နောက်ဆုံးတော့ သူမ မငြင်းသာတော့…။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ တောင်ကိုရီးယားလူမျိုး အသက် ၄၀ နီးပါးရှိတဲ့ ကလေး အဖေ ရီဟာ သူမ နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားကိုလာခဲ့တယ်..။
သူမကို လက်ထပ်လိုက်တယ်။သူမအသက် ၁၈ နှစ်…။
ပြီးတော့…တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားကြီး ရီ ဟာ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးကို သူမ သိပ်ရောက်ဖူးချင်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုခေါ်လာတာပေါ့…။
ရီဟာ ယောက်ျားမျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပြီး တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို လိုက်လာခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူကလေးကို ကြင်နာပါတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးဟာလည်း သူမထက် အသက် ၂ ဆနီးပါးကြီးတဲ့ယောက်ျားကို တစ်ခါမှ မငြူစူခဲ့ဘူး။
သူမ နဲ့ သူမရဲ့မိသားစုအားလုံးက ရီကို ကျေးဇူးတင်ကြတယ်။ ရီဟာ သူမ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအား အစစ အရာရာကူညီတဲ့ သူမ ယောက်ျားလေ… ။
သူမစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သလို အဆိုတော်တွေ မင်းသားတွေကို တွေ့ခွင့်မရခဲ့ပေမယ့် သူတို့နဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းနေရတာကိုပဲ သူမ ဝမ်းသာလှပါပြီ…။
“အကိုတို့ ကိုရီးယားမှာ နေမကောင်းဖြစ်လို့ ငွေမရှိရှင် ဒုက္ခသိပ်ရောက်တယ်..အသက်အာမခံရှိမှ…ညီမကို စိုးရိမ်လို့ အသက်အာမခံတွေ လုပ်ပေးမယ်နော်…”
“ဟုတ်ကဲ့….. ကျေးဇူးပါ အကို…”
ရီ ဟာ မိန်းမ ငယ်ငယ်ချောချောလေးကို စိုးရိမ်တယ်ဆိုပြီး အသက်အာမခံတွေလုပ်ပေးတော့တယ်….။
ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ ဟာ ၃ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး အတွက် အသက်အာမခံတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပေးတော့တယ်။
သာမန်ကိုရီးယားမိသားစုဆို အသက်အာမခံ တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပဲလုပ်ကြပါတယ်။ ရိုးရိုးနေမကောင်းရင် ငွေရေးကြေးရေး အကူညီရမယ့် ရိုးရိုးအသက်အာမခံတစ်ခုလောက် နဲ့ ကိုရီးယားမှာ ကင်ဆာအဖြစ်များလို့ ကင်ဆာ အသက်အာမခံတစ်ခုလောက်ပေါ့…
ရီက ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးအတွက်တော့ အသက်အာမခံ ၂၅ ခု….။
အဲဒီကတည်းက တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ… ဒါကို ရိုးအလွန်းတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး မတွေးနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့…။
သူမ ပြောနေကျစကား…“ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ အကိုရယ်…”
သူမဟာ ယောက်ျားဖြစ်သူရီရဲ့ ကလေးကို ထိန်းပေး ..အိမ်အလုပ်တွေဝိုင်းလုပ်…ယောက်ျားဖွင့်ထားတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်မှာ အလုပ်ဝင်လုပ်….ဘဝဆိုတာ သူမ စိတ်ကူးယဉ်သလို မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရပြီ….။
ဒါနဲ့ပဲ ၆ နှစ်ကြာလာတော့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး ကိုယ်ဝန်ရှိလာတယ်…။
သူမ ဒီလိုကိုယ်ဝန် ရှိလာတော့ သူမကို နိုင်ငံက တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံသားလက်မှတ် ပေးလိုက်တယ်။
ဒီအချိန်အတိုင်းအတာအထိ ရီဟာ စောင့်စားနေပုံရတယ်… ဝမ်းအသာဆုံးကတော့ ရီ ပါပဲ….။
“ငါ့ မိန်းမ ကိုရီးယားသူဖြစ်ပြီကွ… ဂုဏ်ယူပါတယ်မိန်းမရေ…. အကို လက်ဆောင်ပေးမယ်..မင်းကို ကိုးရီးယား နာမည် လှလှလေးပေးမှ…..? ”
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၆ လ ၅ ရက်နေ့ပေါ့…။ရီ ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကတော့ အသက်အာမခံ အသစ်တစ်ခု…။
အဲဒါကတော့ ကိုရီးယားနိုင်ငံက “သက်ပျောက် အသက်အာမခံ” ဆိုပဲ…
ရီက ဈေးပေါပေါ သက်ပျောက်အာမခံပြုလုပ်ပေးတာမဟုတ်…. တန်ဖိုးအကြီးဆုံးတစ်ခုကို ဈေးကြီးကြီးလစဉ်ပေးပြီး ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။
အသက် ၂၀ ကျော်ပဲရှိသေးတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးကို လိုချင်တာက မိတ်ကပ်လှလှ…အကျီင်္လှလှ … ရနေတာက “သက်ပျောက်အာမခံ”…။
မကြာခင်မှာပဲ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးကို သူမယောက်ျားက ဒီလိုစ ပြောလာတယ်..။ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ အဲဒီအသက်အာမခံစာချုပ်တွေမှာ ဘာတွေရေးထားသလဲဆိုတာကို ကိုရီးယားစာ မဖတ်တတ်..နားမလည်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး မသိရှာဘူး…။
အထဲကစာတွေမပြောနဲ့ ခေါင်းစဉ် “အသက်ပျောက် အာမခံကြေး” ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောင် မသိ…။
(Life insurance) အသက်ပျောက် အာမခံကြေးဆိုတာ မိမိသေဆုံးသွားရင် အသက်အာမခံကုမ္ပဏီက ကျန်ရစ်သူမိသားစုကို လျှော်ကြေးပေးတာဖြစ်တယ်။
ဆိုတော့.. ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး သေသွားရင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုက လျှော်ကြေးငွေတွေ ရမှာပေါ့..။
အသက်ကြီးလို့ဖြစ်စေ၊ အနာရောဂါကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေလို့ဖြစ်စေ၊ သေဆုံးသွားရင် ကျန်ရစ် သူမိသားစုက အလျှော် ရတယ်။
နောက်တစ်ခု accidental death and dismemberment (AD&D) ဆိုတာကတော့ သူမ ကို ရီက နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ အသက်အာမခံပေါ့…။
အဲဒါက မတော်တဆထိခိုက်ပြီး ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားရင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုက လျှော်ကြေးအများကြီးရတယ်လေ…။ ( မှတ်ချက်-AD&D အာမခံအမျိုးအစားကတော့ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေရင်တော့ တစ်ပြားမှမပေးပါဘူး။ )
သူမ ဘယ်လိုပဲသေသေ ရီကတော့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးကို life Insurance ရော၊ AD&D ရော ၊ အခြား အာမခံတွေရော အားလုံး လုပ်ထားပြီးသား…။
နောက်ဆုံး တစ်ခုနဲ့ဆို အားလုံး ၂၆ ခုရှိပြီ..။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၂၂ ရက်နေ့
“မိန်းမ ဒီနေ့ ကုန်စုံဆိုင်အတွက် ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ ဆိုးလ်မြို့တက်ကြရအောင်..”
“အကို… ကျွန်မ ကိုယ်ဝန်တော်တော်ရင့်နေပြီ… ဆီးလည်းအောင့်လို့မရ… ဆီးခဏခဏသွားနေရတယ်အကို… ကားအကြာကြီး မစီးနိုင်လို့ပါ…”
“ညီမ မပါရင် အကိုခရီး မသွားချင်လို့ပါကွာ..”
“ညီမ ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်နေလို့ မလိုက်ချင်ဘူး အကိုရယ်.. ဪ.. မေ့နေလို့…မနက်ဖန်မနက် ညီမ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားဟင်း ချက်စားဖို့လည်း ချိန်းထားသေးတယ် အကို…။”
“လိုက်ခဲ့ပါကွာ.. အကိုတစ်ယောက်ထဲ ပျင်းလို့ပါ..”
“သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းပြီးပြီ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..”
ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီးနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးဟာနောက်ဆုံးတော့ မလိုက်ချင်ပဲ ညကြီးမင်းကြီး ဆိုးလ်မြို့မှာ ဈေးဝယ်ဖို့ လိုက်ခဲ့ရတယ်။
ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာကြီးနဲ့ မိန်းမကို ပျင်းလို့ ည ၉ နာရီ ဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ခေါ်တဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ တစ်ယောက်တော့ ပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်…။
သူတို့ ဆိုးလ်မြို့ကိုရောက်တော့ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်…။
သူမနဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ ဟာ ဈေးဝယ်ထွက်ကြတယ်..။
ကိုယ်ဝန်အရင့်အမကြီးနဲ့ မနိုင်မနင်းလမ်းလျှောက်နေရပေမယ့် ကျေးဇူးရှင်ယောက်ျားအရှေ့မှာ မျက်နှာတစ်ချက်မငြှိုးတဲ့သူမ…။
ပြီးတော့ ရီက သူမကို နာမည်ကြီးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ခေါက်ဆွဲပြုတ်တစ်ပွဲကျွေးတယ်..။
စားပြီးသွားတော့ မနက် ၂ နာရီထိုးနေပြီ…။
အဲဒါဟာ သူမဘဝရဲ့နောက်ဆုံးညစာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်း သူမ မသိခဲ့ဘူးလေ…။
**************************************သူမ မသိခဲ့တာတွေ သိပ်များခဲ့တယ်..။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးမှာ ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ပဲအိပ်ပျော်နေပုံရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်… သူမ…။
သူမ နံဘေးမှာတော့ ကားမောင်းနေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ.. အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာ…နှစ်ယောက်တည်း…။
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးဟာ ကားအရှေ့ခန်းမှာ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်..။
ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ ကတော့ ထိုင်ခုံခါးပတ် အသေအချာပတ်ပြီး သတိကြီးစွာကားမောင်းနေရင်းပေါ့….။
အရှိန်နဲ့ ရီ မောင်းလာတဲ့ကားဟာ တည့်တည့်မသွားပဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လမ်းဘေးဖက်စောင်းပြီး ကို ဦးတည်လာပါလေရော…။
အဲဒီညက သူတို့လင်မယား အိမ်ကထွက်လာတော့ ည ၉ နာရီထိုးတော့မယ်…။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေမှာ အရေးပေါ်ကားပျက်တာမျိုး ၊ ကားမမောင်းနိုင်တာမျိုးတို့ ဖြစ်လာရင် လမ်းဘေးအစွန်ဖက်မှာ ကားရပ်ဖို့နေရာ ( emergency parking strip)တွေ စီစဉ်ပေးထားလေ့ရှိပါတယ်။
ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ ဟာ အဲဒီလမ်းဘေးမှာရပ်ထားတဲ့ ၈ တန်လေးတဲ့ ကွန်တိန်နာကားကြီး ကို သူ့ကားနဲ့ ဝင်တိုက်ပစ်လိုက်တယ်။
အချိန်က မနက် ၃ နာရီ ၄၁ မိနစ် ..,။
ထူးထူးဆန်းဆန်း ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးထိုင်နေတဲ့ဘက်က ကားတစ်ခြမ်းပဲ ကွန်တိန်နာကားကြီးနဲ့ ဝင်တိုက်မိတာ….။
ကားမောင်းတဲ့ ရီ ရှိတဲ့တစ်ခြမ်းကတော့ သိပ်အထိအခိုက်မရှိ…။
သူမနဲ့ သူမဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးရှိတဲ့ ကားတခြမ်းလုံးဟာ ကွန်တိန်နာအောက်ထဲကိုလုံးလုံးဝင်သွားတယ်…။
“၁၁၉ ကပါလားခင်ဗျ… ကျွန်တော် ကားမောင်းရင်း အိပ်ငိုက်သွားလို့ ရပ်ထားတဲ့ ကားကြီးကို အနောက်ကနေဝင်တိုက်မိတာ..ကယ်ကြပါဦးခင်ဗျာ…..”
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲတွေရောက်လာတော့လရီ ဟာ ဝမ်းနည်းစွာငိုချလိုက်တယ်…။
“ကိုယ်ဝန်နဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ….မိန်းမရေ…အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား မိန်းမရယ်…မိန်းမဘယ်မှာလဲ ရှာပေးပါခင်ဗျ…”
သူမကို ကွန်တိန်နာကားအောက်က ခက်ခက်ခဲခဲ ထုတ်ယူခဲ့ရတယ်…။
“ကျွန်မတို့ ၁၁၉ အသက်ကယ်ဆယ်ရေးပါရှင့်…။ ကျွန်မတို့ ကားရောက်လာတော့ ကားအရှေ့ပိုင်း တစ်ခြမ်းက ကွန်တိန်နာအောက်ကိုရောက်နေပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးထိုင်နေတဲ့ ဘက်က ကားပြူတင်းပေါက်ပွင့်နေပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးလက်တစ်ဖက်က ကားတခါးဘောင်ပေါ်ကနေ အပြင်ကိုထွက်နေတယ်…။ကျွန်မ လက်ကောက်ဝတ်ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ တကိုယ်လုံးအေးစက်ပြီး သေနေပါပြီ…ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ အမြန်ဆုံးလာပါ…”
ရဲကား.. အရေးပေါ်အသက်ကယ် ဆေးရုံကား.. သတင်းသမားတွေ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ် အပြေးရောက်လာကြတယ်။
“အသက် ၂၄ နှစ်ရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးလေးစီးလာတဲ့ကားဟာ အဝေးပြေးလမ်းနဘေးမှာ ရပ်ထားတဲ့ ထရပ်ကားကို ဝင်တိုက်ပြီး သူမဟာ ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ ”
“အမျိုးသမီးလေးဟာ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသူလေးဖြစ်ပြီး အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ကိုရီးယားအမျိုးသား ရီ နဲ့ လက်ထပ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီအကြောင်းဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၈ လပိုင်း ၂၃ ရက်နေ့မှ သတင်းထဲပါလာတယ်။
ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ ကတော့ ထိခိုက်ပွန်းပဲ့ဒါဏ်ရာ အနည်းငယ်ပဲရသွားတယ်တဲ့….။
****************************************” ကျွန်တော် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်နေတဲ့မိန်းမကို မကြည့်ရက်ဘူး..အမြန်ဆုံးသင်္ဂြိုလ်ချင်တယ်…”
ရီဟာ နောက်တနေ့ကျတော့ သူမအလောင်းကိုချက်ခြင်း မီးသင်္ဂြိုလ်လိုက်တယ်..။
သူမ သေဆုံးပြီး ၁၁ ရက်အကြာ…ရီဟာ အသက်အာမခံဌာနကို ဖုန်းဆက်တယ်..။
ကိုယ်ဝန် ၇ လနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ ကားတိုက်မှုနဲ့ သေဆုံးသွားပါပြီ… ဒါကြောင့် အသက်အာမခံကြေးလျှောက်ထားပါတယ်..”
အသက် အာမခံအားလုံး ၂၆ ခုဆိုတော့ စုစုပေါင်းရီ ရ မယ့်ငွေဟာ
“သိန်းပေါင်း ၉ သောင်း ၅ ထောင်…။”
အသက်အာမခံဌာနက ရဲစခန်းကို ချက်ချင်း အကြောင်းကြားတယ်။
ဒါဟာ လုပ်ကြံမှုလေ…။ဘယ်သူ့မေးမေး ဒါဟာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုပါ…။
ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေက အဲဒီတော့မှ အလန့်တကြား စုံစမ်းကြတယ်…။
အဝေးပြေးလမ်းတလျှောက်လုံးက CCTV တွေကိုအားကိုးတကြီးကြည့်ကြတယ်…။
နားနေတဲ့နေရာ ( rest area ) ပေါ်မှာ ရီ မောင်းလာတဲ့ကားဟာတစ်ခါရပ်သွားပြီး ယောက်ျားဖြစ်သူက အိမ်သာသွားတာတွေ့ရတယ်။
ဆီးခဏခဏသွားတတ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမကတော့ ကားထဲကထွက်လာတာ မတွေ့ရ…။
သူမဟာ အဲဒီကတည်းက သေနေပြီလား မသင်္ကာစရာ…။
ပြီးတော့…CCTV မှာပေါ်နေတဲ့ ရီမောင်းလာသည့်ကားဟာ ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့် တမင်သက်သက် ကွန်တိန်နာကြီးကို ဝင်တိုက်နေတယ်လေ…။
ရီ မောင်းလာတဲ့ကားဟာ လမ်းဘေးဖက်စောင်းပြီး ကိုဦးတည်နေရင် ဆက်တိုက် စောင်းပြီးကားတစ်ခုလုံး ဝင်တိုက်မှာပေါ့…။ရီဟာ ကားကို လမ်းဘေးဖက်ကို စောင်းပြီးမောင်းနေရာက သူထိမှာစိုးလို့ ကားကို ပြန်တည့်လိုက်တာ CCTV မှာပေါ်နေတယ်။
CCTV မှာ ကားထဲက ရီရဲ့မျက်နှာကို သေချာမမြင်ရတော့ တကယ်အိပ်ငိုက် မငိုက် သက်သေပြလို့မရ..။
“ကျွန်တော် အိပ်ငိုက်နေလို့ ကားကို စောင်းလိုက် တည့်လိုက် မောင်းနေမိတာဖြစ်ပါတယ်” ဆိုတာချည်းပဲ ပြောနေတာပေါ့…။
အိပ်ငိုက်ပြီး ကားတိုက်တာကလည်း သူ့ကိုယ်သူမထိခိုက်အောင် မိန်းမဘက်တစ်ခြမ်းတည်း…။
ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေဟာ အဲဒီအချက်အလက်တွေကိုစုပြီး ရီ ကို လူသတ်မှုနဲ့ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်..။
ကမ္ဘောဒီးယား မိန်းမငယ်သေဆုံးသွားပြီး ၃ လအကြာပေါ့…။
ယောက်ျားဖြစ်သူ ရီ က ဒီလိုပြောတယ်…။
“ကျွန်တော့် မိန်းမနဲ့ကလေး သေဆုံးသွားလို့ သေမတတ်ခံစားနေရပါတယ်… ကျွန်တော့်ကို သံသယဖြစ်ရက်တယ်ဗျာ.. ခင်ဗျားတို့ လူမဟုတ်ဘူးလား..?”…တဲ့။
” လူမဟုတ်တဲ့သူက ဘယ်သူလဲ သိချင်လို့ပါခင်ဗျာ..”
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးသေဆုံးတဲ့ညက အလောင်းကို မီးမသင်္ဂြိုလ်ခင် ထုံးစံအတိုင်း ဆေးရုံက ဆေးစစ်ခဲ့တယ်။ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေကတောင်း ကြည့်လိုက်တော့
“အစာအိမ်ထဲ၌ အိပ်ဆေးကိုတွေ့ရသည်”လို့ ရေးထားတယ်..။
ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက် အိပ်ဆေး ပမာဏဘယ်လောက်အထိရှိသလဲဆိုတာ ထပ်စစ်ခွင့်မရှိတော့ …။ အလောင်းက မီးသင်္ဂြိုလ်လိုက်ပြီလေ…။
အဲဒီတုန်းက အသက်အာမခံကြေးအကြောင်းမသိကြသေးတဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေက ရိုးရိုးကားတိုက်မှုဆိုပြီး အလေးမထားခဲ့….။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ကို ဆရာဝန်တွေဟာ အိပ်ဆေးမပေးဘူးလေ…။
“သူငယ်ချင်းက အဖျားပျောက်ဆေးသောက်မိလို့ ပထမကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းက သူ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာ ၃ လပဲရှိသေးတာ..။ အခု ဒုတိယကိုယ်ဝန်မှာ ဆေးဆိုလုံးဝမသောက်ပဲ ဝေးဝေးရှောင်နေတာပါ။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း အိပ်ဆေးသောက်တယ်ဆိုတာလုံးဝကို မဖြစ်နိုင်ဘူး ။တစ်ယောက်ယောက်က အိပ်ဆေးခတ်လိုက်တာပါ..”
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး အလောင်းကို ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းက ပထမဆုံးထိကိုင်လိုက်တော့ အေးစက်တောင့်တင်းနေတယ်..။
လူတစ်ယောက်သေဆုံးသွားပြီးရင် သွေးတွေဟာ မလည်ပတ်တော့တာကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့သွေးတွေဟာ နိမ့်ရာအပိုင်းကို အနည်ထိုင် စုဝေးသွားကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ဘို့ ၄ နာရီကြာပါတယ်။
ဥပမာ- အလောင်းက ပက်လက် အိပ်နေတဲ့ပုံစံဆိုပါတော့.. သွေးတွေက ကြမ်းပြင်နဲ့ထိနေတဲ့ ကျောကုန်းဖက်ကိုစုတယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးက ထိုင်နေတာဆိုတော့ ခြေထောက်ပိုင်းမှာ သွေးတွေစုဝေးလာတယ်။
ကားတိုက်မှုဖြစ်တာ ၁၄ မိနစ်ပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးရဲ့ အလောင်း ခြေထောက်ပိုင်းမှာ သွေးတွေစုပြီး ညိုမည်းနေတာကို ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းက မသင်္ကာလို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားခဲ့တယ်။
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးဟာ ကားတိုက်မှုမဖြစ်ခင်ကတည်းက အသက်မရှိတော့ဘူးလို့ ပညာရှင်တွေက ခန့်မှန်းကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ အလောင်းကမရှိတော့ … ဓာတ်ပုံသက်သေက မခိုင်မာ…။
အသက်အာမခံဋ္ဌာနနဲ့ ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေက အမှုမှန်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရီကို ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေက တရားစ စွဲကြတယ်….။
အောက်ခြေ တရားရုံးက တရားသူကြီးက သက်သေအထောက်အထား မပြည့်စုံလို့ အမှုကနေ ကွင်းလုံးကျွတ် တရားသေလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။
တောင်ကိုရီးယား ဥပဒေမှာ သက်သေဟာ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေက လက်မလျှော့…။ ဒီထက်ပိုမြင့်တဲ့ တရားရုံးကို တဆင့်တက်ပြီး တရားစွဲကြပြန်တယ်။
ဒါနဲ့…ရီ ဟာ သေမတတ်ခံစားနေတယ်တဲ့လား…?
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပြောတာနဲ့တော့ တလွဲစီ…..။
“အသုဘချမယ့်နေ့က ကျွန်မတို့က ဝမ်းနည်းလွန်းလို့ ရေတောင်မသောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ရီ က ထမင်းတွေ အားရပါးရစားနေတာများ မြင်လို့တောင်မကောင်းဘူး..”
ဒါကို မယုံလို့ ရီ ကို စိတ်ပညာရှင်တွေက စစ်ဆေးကြည့်တော့ ရီဟာ ဝမ်းနည်းမှုကို လုံးဝမခံစားရပဲ စိတ်ပျော်ရွှင်နေတာကို တွေ့ရတယ်…။
ဒါပေမဲ့ ရီ ရဲ့ပါးစပ်ကတော့
“သေချင်တယ်ဗျာ…မိန်းမနဲ့ကလေးကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ရလို့ သေရပါတော့မယ်.. သူတို့အစား ကျွန်တော်သာ သေလိုက်ပါတော့..” မျက်ရည်တော့ တစ်စက်မှမကျ….။
သူမ အသက်အာမခံ ၂၆ ခုထဲမှာ ကားတောင်မမောင်းတတ်တဲ့ သူမအတွက် မတော်တဆကားတိုက်မှုအသက်အာမခံက ၁၁ ခု …ဒါ ယုတ္တိရှိသလား..။
*************************************ရှိသေးတယ်…။ရီဟာ ကားမောင်းရင် ဘယ်သောအခါမှ ကားထိုင်ခုံခါးပိတ်ကို ပတ်လေ့မရှိဘူးတဲ့…။
အဲဒီနေ့က ရီရဲ့ကား အဝေးပြေးလမ်းမပေါ် စ မောင်းတုန်းက ရီဟာ ထိုင်ခုံခါးပတ်မပတ်ထားဘူး။
ရီဟာ ကားတိုက်မှုမဖြစ်ခင် ၁ နာရီလောက်အလိုမှာ ထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ကိုပတ်လိုက်တယ်။
ဒီအချက်တွေကို ထောက်ပြပြီး ရဲထောက်လှမ်းရေးတို့က တရားရုံးကိုထပ်တက်တာပေါ့…။ဒီတစ်ခါတော့ တရားသူကြီးက လူသတ်မှုဆိုတာ အတည်ပြုလိုက်တယ်…။
“မသေမချင်း အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒါဏ်”…လို့ အပြစ်ချလိုက်တယ်။
ကဲ…သူများသမီးပျိုကို သတ်ပစ်ဖို့ ခေါ်ယူလာတဲ့ လူယုတ်မာ.. ကိုယ့်ရင်သွေးကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ပစ်တဲ့လူမဆန်သူ…။
ထောင်ထဲမှာ သေတဲ့အထိအပြစ်ခံပေတော့..လို့ တောင်ကိုရီးယားပြည်သူတွေ ဝမ်းသာကြပြန်တယ်..။
ရီကလည်း ဒီအတိုင်းနေမလား…. အမြင့်ဆုံးတရားရုံးကိုတက်ပြီး အယူခံဝင်ပြန်တယ်..။
ဒါဟာ သူ့အတွက် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလေ…။ သဌေးဖြစ်မလား ..ခွေးဖြစ်မလား….။
ဒီလိုနဲ့ တရားစီရင်မယ့် နောက်ဆုံးနေ့ကို ရောက်လာခဲ့တယ်…။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ၅ လပိုင်း ၃၁ရက်နေ့
တရားသူကြီးက ရီကို သေဒါဏ်ပေးချင်လောက်အောင် ရွံရှာပေမဲ့ သက်သေအလွန်အားနည်းတာကြောင့် အမှုက ကွင်းလုံးကျွတ် တရားသေ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်…။
ရီတို့မိသားစုဟာ သူတို့တစ်သက်လုံးသာမက မြေးတွေမြစ်တွေပါ ထိုင်စားလို့ မကုန်နိုင်တဲ့ငွေတွေရသွားတယ်..။
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေး နဲ့ ဗိုက်ထဲကလေးလေးကတော့ သေပေးလိုက်ရတယ်။
ဒီလို…ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ နိဂုံးဟာ “သိန်းပေါင်း ၉ သောင်း ၅ ထောင်အတွက် တန်ဖိုးရှိသည့်အသက် နှစ်ချောင်း ရက်ရက်စက်စက် စတေးလိုက်သည်..” ပေါ့…။
သူမ သိပ်ရောက်ဖူးချင်တဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှာသူမ ၆ နှစ်နီးပါးနေလိုက်ရတယ်…. ။
KPOP..?လက်တွေ့မှာတော့ TV ကလာတဲ့ KPOP တွေကိုတောင် နားထောင်ဖို့ ကြည့်ဖို့ အချိန်မရခဲ့…။
အပိုင်းဆက် ဒရမ်မာတွေဆို ဝေးသေး…။
ရီ့ကလေးကို သူမကလေးလို အနွံအတာခံပြီး .. အလုပ်တွေနဲ့ အမြဲလုပ်နေတဲ့သူမ…။
သူမ မိဘတွေကို ငွေပို့ပေးတတ်လို့ ကျေးဇူးရှင် ဆိုပြီး ယောက်ျားကို နတ်တစ်ပါးလို ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့သူမ..,။
မိဘကို လွမ်းဆွေးတမ်းတလွန်းလို့ လူမသိ သူမသိငိုကြွေးမိတဲ့နေ့တွေမှာတော့ မျက်ရည်တွေနဲ့ သူမ…။
အချိန်တန်တော့ ရီက သူမကို အသက်ရှင်ခွင့်မပေးတော့ဘူး….။
သူမ သိပ်ချစ်ရတဲ့ရင်သွေးလေးနဲ့အတူ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ ဒီလို ပက်ပက်စက်စက်သေခဲ့ရပြီ..။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ အတော် ခံပြင်းကြတယ်။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ၉၉% ကမ္ဘောဒီးယား အမျိုးသမီးတွေ တောင်ကိုရီးယားအမျိုးသားတွေနဲ့ လက်မထပ်ကြတော့ဘူး…။
ကမ္ဘောဒီးယားတစ်နိုင်ငံလုံး စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ဘာတတ်နိုင်မှာတဲ့လဲ..။
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား စစ်ဖြစ်ကြမှာလား..?
ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးအတွက် အမှုစစ်တာဝန်ကျတဲ့ တောင်ကိုရီးယား ရဲထောက်လှမ်းရေးတွေက တကယ့်ကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေးခဲ့ပါတယ်။
အသက်အာမခံဌာနကလည်း အရှုံးပေါ်ပြီမို့ ဒီအမှုကို အမှန်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ အလွတ်စုံထောက်တွေနဲ့ အမျိုးမျိုးစုံစမ်းကြတယ်။
တရားသူကြီးကလည်း နိုင်ငံတကာကပို့တဲ့ ” တရားမျှတပါ..” ဆိုတဲ့စာတွေကြားမှာ မနည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်သူမှ မတတ်နိုင်…။ရီ ဟာ အကွက်စေ့လှတယ်..။
ဒါဟာ လူသတ်မှုလား လူသေမှုလားလို့ အနားကဖြတ်သွားတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကို မေးကြည့်ရင်တောင် သိဦးမယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရ သက်သေမရှိရင် ဘာမှဖြစ်မလာဘူးလေ…။
SBS ရုပ်မြင်သံကြားကတော့ ဒီအမှုကို အခုအချိန်အထိ လက်မလျှော့သေးပဲ ကြိုးစားနေဆဲ…။
ဒါပေမဲ့ အမြင့်ဆုံးတရားရုံးက အမိန့်ချပြီးပြီဆိုရင်တော့ မျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ပြီ…။
သူမကို ဘာလို့ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှ သတ်တာလဲ…..?
တောင်ကိုရီးယား ဥပဒေအရ ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးက ကိုရီးယား နိုင်ငံသားကဒ် အမြန်ရတယ်လေ..။
ဒီလိုနိုင်ငံသားကဒ်ရတော့ရီဟာ ပိုက်ဆံအရဆုံး AD&D အသက်အာမခံ ထားလို့ရခဲ့တာပေါ့…။
ဒါဟာ နှစ်ရှည် စီမံကိန်းတစ်ခု…။ရီ စောင့်နိုင်ပါတယ်…,၁၈ နှစ်သမီးပျိုလေးနဲ့ ၆ နှစ်ပေါင်းခဲ့ရတာ နည်းတဲ့အမြတ်လား..။အိမ်အလုပ်တွေလည်းကူလုပ်သေးတယ်..။ကလေးအတွက်လည်း အိမ်အကူတစ်ယောက် ငွေပေးပြီးငှားမယ့်အစား ဒီပိုက်ဆံကို သူမ မိသားစုထောက်ပံ့တော့ ကျေးဇူးတောင် အတင်ခံရသေး…။နောက်ဆုံး တစ်သက်စားမကုန်တဲ့ငွေတွေ အသက်နဲ့လဲပြီး ပုံပေးသွားခဲ့တဲ့ မိန်းမလေ…။အတော့်ကို ဟန်ကျခဲ့တာပေါ့..။
ငွေဟာ သက်ရှိလူသားတွေရဲ့ အသက်တွေကို လမ်းပေါ်က အမှိုက်စလေးတွေလိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့တယ်..။
အသက်အာမခံကြေးကြောင့် ကိုရီးယားမှာ၊ဂျပန်မှာ သူတို့လူမျိုးအချင်းချင်းတောင် အမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြီးသတ်နေကြပါတယ်။
သက်ပျောက် အသက်အာမခံကြေးဆိုတာ ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ လက်ခံရရှိတာမို့ မိသားစုအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ထပ်ပြီး တော်စပ်လာတဲ သွေးမစပ် မိသားစုဝင်အသစ်တွေကတော့ အန္တရာယ်အများဆုံးပေါ့…။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာ ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခု မဟုတ်တဲ့အတွက် ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးတွေအပါအဝင် အရှေ့တိုင်းသူလေးတွေအများစုဟာ အသက်အာမခံကြေးဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်မသိကြပါဘူး။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ မြို့ကြီးပြကြီးမှာနေတဲ့သူတွေတောင် တော်တော်ဗဟုသုတရှိမှသိတာပါ။
ဒီလို ဘာမှ မသိရှာတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူကလေးကိုမှ ပစ်မှတ်ထားပြီး သတ်ပစ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူယုတ်မာ…။
ဈေးထဲက ငါးအရှင်လတ်လတ်ကို ခုတ်ထစ်ရောင်းစားပြီး ပိုက်ဆံရှာတာနဲ့ ဘာထူးလို့လဲ..။
“မင်းလို လူမဆန်တဲ့သူတွေကြောင့် ငါတို့တိုင်းပြည် နာမည်ပျက်တာ..” တဲ့
ဒီအကြောင်းကို တောင်ကိုရီးယား သတင်းဆောင်းပါးတွေမှာ blog တွေမှာ ဒေါသဖြစ်ပြီး ရေးကြတယ်…။
စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ နယ်မြို့လေးက သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးကတော့ ဒီလို ငွေကြောင့် လူအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ကြတယ်ဆိုတာကြားတောင် မကြားဖူးကြလို့ မယုံကြဘူးလေ..။
သူတို့ကို ဘယ်လိုရှင်းပြပြ အသက်အာမခံဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောင် နားမလည်ကြဘူး။
“သမီးလေးနဲ့မြေး သေဆုံးသွားလို့ ငါတို့သားသမက်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာမှာပဲ…. ”
“ငါတို့ ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံးက ဒီလိုစွပ်စွဲတာ ဘယ်ကောင်းပါ့မလဲ…မဟုတ်ရင် အားနာစရာကြီး…”
” သား သမက်လေး နေမှကောင်းရဲ့လား..” တဲ့…။
ဒါပေမဲ့ တောင်ကိုရီးယားမှာနေချင်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားသူလေးနဲ့ လူမဖြစ်လိုက်ရတဲ့ သားလေးကတော့ တမလွန်ဘဝကနေ လောကကြီးကို စိတ်နာနေလေမလား….။
Credit: မရွှေမိုး ( ကိုရီးယား )
[Unicode]ကိုရီးယားကို လာခငျြလှနျးလို့ ဘယျလိုပဲလာရလာရ ဆိုသူမြားဖတျပါ
တောငျကိုရီးယားရောကျဖူးခငျြတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးထိုငျးရုပျရှငျ နဲ့ ထိုငျးအဆိုတျောတျောတှေ ခတျေစားခဲ့တဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံမှာ ၂၀၀၀ ခုနှဈကြျောလောကျကစပွီး KPOP နဲ့ တောငျကိုရီးယား ဒရမျမာတှခေတျေစားလာခဲ့တယျ။
KPOP ထဲက အဆိုတျောအကိုကွီးတှေ ဒရမျမာထဲက ရုပျရှငျမငျးသားခြောခြောတှကေို စိတျလှုပျရှားမိတဲ့ ( fan ) ဖနျတှအေထဲမှာ ၁၀ ကြျောသကျ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး တဈယောကျလညျးပါခဲ့တာပေါ့..။
၂၀၀၄ ခုနှဈ ကမ်ဘောဒီးယား TV မှာပွသသှားတဲ့ Rain နဲ့ Son Hye Kyo တို့ သရုပျဆောငျထားတဲ့ “Full House” ဆိုတဲ့ အခနျးဆကျ ဒရမျမာ ဟာ သူမကို ပိုပွီး စိတျကူးယဉျစခေဲ့တယျ။
အို…တောငျကိုရီးယားက အကိုတှခြေောလညျးခြော ခဈြလဲခဈြတတျပါဘိ…။
သူမ တောငျကိုရီးယားကိုရောကျဖူးခငျြတယျ။သူမနိုငျငံမှာမရှိတဲ့ နှငျးတှကေို မွငျဖူးခငျြတယျ။သူမ ကိုရီးယားစကားတှလေညျး ပွောတတျခငျြတယျ။
သူမဟာ ကိုရီးယား မိနျးကလေးတှကေိုတုပွီး ဝတျစားဆငျယငျရတာလညျးအမော…..။
ကမ်ဘောဒီးယား မွို့ပျေါ စတိုးဆိုငျကွီးတှမှော ရောငျးတဲ့ တောငျကိုရီးယားက မိတျကပျတှေ ဈေးကွီးလှနျးလို့မဝယျနိုငျ….။
ငေးပွီးပွနျလာရတိုငျး သူမ ဒီလိုတှေးတယျ…။
” အငျး…တဈနနေ့ေ့…ငါ ဒီလိုမိတျကပျတှလှေလှလေးလိမျးပွီး ငါခဈြတဲ့ အဆိုတျောတှနေဲ့ ခငျခငျမငျမငျ တရငျးတနှီး စကားပွောခှငျ့ရရငျသိပျကောငျးမှာပဲ…”
သူမ ဓာတျပုံလှလှလေးတှရေိုကျတယျ..။ ပွီးတော့သူငယျခငျြးအကူအညီနဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုကိုသှားပွီး သူမနာမညျနဲ့ ဓာတျပုံတှကေို သှားပေးလိုကျတယျ။
အဲဒီ သူငယျခငျြးကွောငျ့ ဒီနညျးလမျးကိုသိခဲ့တာပေါ့…။
” ငါ့အသိတဈယောကျ ကိုရီးယားလူမြိုးနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျလိုကျတာ… အတျော အဆငျပွတေယျတဲ့….ကိုရီးယားမိသားစုက အရမျးသဘောကောငျးတာပဲတဲ့…”
အဲဒီတုနျးက သူမ အသကျ ၁၇ နှဈ…။ကလေးပီပီ သူမ ဒီလိုတှေးလိုကျတယျ..။
“ငါ.. တောငျကိုရီးယားလူမြိုးနဲ့လကျထပျမယျ…ငါ ကခြောတော့ အဆိုတျောတှနေီးပါးခြောတဲ့ အိုးပါးတှေ လကျထပျဖို့ကမျးလှမျးမှာပဲ….”
သူမတို့ သှားခဲ့တဲ့ကုမ်ပဏီက သတို့သမီးအလိုရှိနတေဲ့ ကိုရီးယားအမြိုးသားတှနေဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူတှကေို အောငျသှယျပေးတဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုပေါ့..။
ဖူးစာ ကိုကိုနဲ့ မွနျမွနျတှရေ့ပါစေ… သူမ ဆုတောငျးတယျ။
ဆငျးရဲတဲ့ သူမဘဝမှာ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံကွီးကိုရောကျဖို့ဆိုတာ ဒီနညျးကလှဲပွီး ဘာတဈခုမှမရှိဘူးလို့ သူမထငျထားခဲ့မိတာပေါ့..။
မကွာခငျမှာပဲ ကုမ်ပဏီက အကွောငျးကွားလာတယျ… ဖူးစာရှငျတှပွေီ့တဲ့…။
သူမ စိတျကူးယဉျခဲ့တာ အဆိုတျော ရုပျရှငျမငျးသားတှနေဲ့ဆငျတဲ့ အိုးပါး….။
လကျတှေ့ သူမကို ရှေးခယျြတာက အသကျ ၄၀ နီးပါးရှိတဲ့ ကိုရီးယား ဦးလေးကွီး ရီ ** တဲ့…..။
ဓာတျပုံကွညျ့လိုကျတော့ ဦးလေးကွီးက နုလိုကျတာ….။ ဆယျကြျောသကျ ကမ်ဘောဒီးယား အမြိုးသားတှလေောကျတောငျ နုပြိုနတေယျ။
အခွား ကိုရီးယားအမြိုးသား ဓာတျပုံတှနေဲ့ ယှဉျ ကွညျ့တော့ ဦးလေးကွီး ရီ က အခြောဆုံးပဲ..။
အငျး … မဆိုးပါဘူး…။
ဒီလိုနဲ့ တဈနတေ့ော့ သူမ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံကိုရောကျဖို့ လမျးစတဈခု ရလာတယျ။**************************************
ဒါပမေဲ့..အောငျသှယျပှဲစားက တဈပတျလောကျကွာမှ ဘာပွောတယျမှတျလဲ..။
” ဪ… မနေ့လေို့ …သူက ကလေး အဖေ မုဆိုးဖိုနျော…”
အသကျ ၁ရနှဈကြျောရုံ ရှိသေးတဲ့ သူမက အသကျ ၁၀ နှဈနီးပါးရှိတဲ့ကလေးရဲ့အမေ လုပျရမယျဆိုတော့ သူမ ကွောကျလနျ့သှားတယျ။
ဒါပမေဲ့..အောငျသှယျတှကေ အပွောကောငျးကောငျးနဲ့ ဖြောငျးဖလြို့ နောကျဆုံးတော့ သူမ မငွငျးသာတော့…။
၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ တောငျကိုရီးယားလူမြိုး အသကျ ၄၀ နီးပါးရှိတဲ့ ကလေး အဖေ ရီဟာ သူမ နထေိုငျတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားကိုလာခဲ့တယျ..။
သူမကို လကျထပျလိုကျတယျ။သူမအသကျ ၁၈ နှဈ…။
ပွီးတော့…တောငျကိုရီးယား အမြိုးသားကွီး ရီ ဟာ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးကို သူမ သိပျရောကျဖူးခငျြတဲ့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံကိုချေါလာတာပေါ့…။
ရီဟာ ယောကျြားမကျြနှာ တဈရှာထငျပွီး တောငျကိုရီးယားနိုငျငံကို လိုကျလာခဲ့တဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူကလေးကို ကွငျနာပါတယျ။
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးဟာလညျး သူမထကျ အသကျ ၂ ဆနီးပါးကွီးတဲ့ယောကျြားကို တဈခါမှ မငွူစူခဲ့ဘူး။
သူမ နဲ့ သူမရဲ့မိသားစုအားလုံးက ရီကို ကြေးဇူးတငျကွတယျ။ ရီဟာ သူမ မိသားစု စားဝတျနရေေးအား အစစ အရာရာကူညီတဲ့ သူမ ယောကျြားလေ… ။
သူမစိတျကူးယဉျခဲ့သလို အဆိုတျောတှေ မငျးသားတှကေို တှခှေ့ငျ့မရခဲ့ပမေယျ့ သူတို့နဲ့ တဈနိုငျငံတညျးနရေတာကိုပဲ သူမ ဝမျးသာလှပါပွီ…။
“အကိုတို့ ကိုရီးယားမှာ နမေကောငျးဖွဈလို့ ငှမေရှိရှငျ ဒုက်ခသိပျရောကျတယျ..အသကျအာမခံရှိမှ…ညီမကို စိုးရိမျလို့ အသကျအာမခံတှေ လုပျပေးမယျနျော…”
“ဟုတျကဲ့….. ကြေးဇူးပါ အကို…”
ရီ ဟာ မိနျးမ ငယျငယျခြောခြောလေးကို စိုးရိမျတယျဆိုပွီး အသကျအာမခံတှလေုပျပေးတော့တယျ….။
ယောကျြားဖွဈသူ ရီ ဟာ ၃ နှဈအတှငျး ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး အတှကျ အသကျအာမခံတှေ တဈခုပွီးတဈခုဆကျတိုကျပွုလုပျပေးတော့တယျ။
သာမနျကိုရီးယားမိသားစုဆို အသကျအာမခံ တဈခုနှဈခုလောကျပဲလုပျကွပါတယျ။ ရိုးရိုးနမေကောငျးရငျ ငှရေေးကွေးရေး အကူညီရမယျ့ ရိုးရိုးအသကျအာမခံတဈခုလောကျ နဲ့ ကိုရီးယားမှာ ကငျဆာအဖွဈမြားလို့ ကငျဆာ အသကျအာမခံတဈခုလောကျပေါ့…
ရီက ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးအတှကျတော့ အသကျအာမခံ ၂၅ ခု….။
အဲဒီကတညျးက တဈခုခုတော့မှားနပွေီ… ဒါကို ရိုးအလှနျးတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး မတှေးနိုငျခဲ့ဘူးပေါ့…။
သူမ ပွောနကေစြကား…“ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ အကိုရယျ…”
သူမဟာ ယောကျြားဖွဈသူရီရဲ့ ကလေးကို ထိနျးပေး ..အိမျအလုပျတှဝေိုငျးလုပျ…ယောကျြားဖှငျ့ထားတဲ့ ကုနျစုံဆိုငျမှာ အလုပျဝငျလုပျ….ဘဝဆိုတာ သူမ စိတျကူးယဉျသလို မဟုတျဘူးဆိုတာသိရပွီ….။
ဒါနဲ့ပဲ ၆ နှဈကွာလာတော့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး ကိုယျဝနျရှိလာတယျ…။
သူမ ဒီလိုကိုယျဝနျ ရှိလာတော့ သူမကို နိုငျငံက တောငျကိုရီးယား နိုငျငံသားလကျမှတျ ပေးလိုကျတယျ။
ဒီအခြိနျအတိုငျးအတာအထိ ရီဟာ စောငျ့စားနပေုံရတယျ… ဝမျးအသာဆုံးကတော့ ရီ ပါပဲ….။
“ငါ့ မိနျးမ ကိုရီးယားသူဖွဈပွီကှ… ဂုဏျယူပါတယျမိနျးမရေ…. အကို လကျဆောငျပေးမယျ..မငျးကို ကိုးရီးယား နာမညျ လှလှလေးပေးမှ…..? ”
၂၀၁၄ ခုနှဈ ၆ လ ၅ ရကျနပေ့ေါ့…။ရီ ပေးတဲ့လကျဆောငျကတော့ အသကျအာမခံ အသဈတဈခု…။
အဲဒါကတော့ ကိုရီးယားနိုငျငံက “သကျပြောကျ အသကျအာမခံ” ဆိုပဲ…
ရီက ဈေးပေါပေါ သကျပြောကျအာမခံပွုလုပျပေးတာမဟုတျ…. တနျဖိုးအကွီးဆုံးတဈခုကို ဈေးကွီးကွီးလစဉျပေးပွီး ပွုလုပျပေးတာဖွဈတယျ။
အသကျ ၂၀ ကြျောပဲရှိသေးတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးကို လိုခငျြတာက မိတျကပျလှလှ…အကြီင်ျလှလှ … ရနတောက “သကျပြောကျအာမခံ”…။
မကွာခငျမှာပဲ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးကို သူမယောကျြားက ဒီလိုစ ပွောလာတယျ..။ကိုရီးယားဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ အဲဒီအသကျအာမခံစာခြုပျတှမှော ဘာတှရေေးထားသလဲဆိုတာကို ကိုရီးယားစာ မဖတျတတျ..နားမလညျတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး မသိရှာဘူး…။
အထဲကစာတှမေပွောနဲ့ ခေါငျးစဉျ “အသကျပြောကျ အာမခံကွေး” ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောငျ မသိ…။
(Life insurance) အသကျပြောကျ အာမခံကွေးဆိုတာ မိမိသဆေုံးသှားရငျ အသကျအာမခံကုမ်ပဏီက ကနျြရဈသူမိသားစုကို လြှျောကွေးပေးတာဖွဈတယျ။
ဆိုတော့.. ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး သသှေားရငျ ကနျြရဈသူမိသားစုက လြှျောကွေးငှတှေေ ရမှာပေါ့..။
အသကျကွီးလို့ဖွဈစေ၊ အနာရောဂါကွောငျ့ဖွဈစေ၊ မိမိကိုယျမိမိ သတျသလေို့ဖွဈစေ၊ သဆေုံးသှားရငျ ကနျြရဈ သူမိသားစုက အလြှျော ရတယျ။
နောကျတဈခု accidental death and dismemberment (AD&D) ဆိုတာကတော့ သူမ ကို ရီက နောကျဆုံးလကျဆောငျပေးလိုကျတဲ့ အသကျအာမခံပေါ့…။
အဲဒါက မတျောတဆထိခိုကျပွီး ရုတျတရကျသဆေုံးသှားရငျ ကနျြရဈသူမိသားစုက လြှျောကွေးအမြားကွီးရတယျလေ…။ ( မှတျခကျြ-AD&D အာမခံအမြိုးအစားကတော့ မိမိကိုယျမိမိ သတျသရေငျတော့ တဈပွားမှမပေးပါဘူး။ )
သူမ ဘယျလိုပဲသသေေ ရီကတော့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးကို life Insurance ရော၊ AD&D ရော ၊ အခွား အာမခံတှရေော အားလုံး လုပျထားပွီးသား…။
နောကျဆုံး တဈခုနဲ့ဆို အားလုံး ၂၆ ခုရှိပွီ..။
၂၀၁၄ ခုနှဈ ၈ လပိုငျး ၂၂ ရကျနေ့
“မိနျးမ ဒီနေ့ ကုနျစုံဆိုငျအတှကျ ပစ်စညျးတှဝေယျဖို့ ဆိုးလျမွို့တကျကွရအောငျ..”
“အကို… ကြှနျမ ကိုယျဝနျတျောတျောရငျ့နပွေီ… ဆီးလညျးအောငျ့လို့မရ… ဆီးခဏခဏသှားနရေတယျအကို… ကားအကွာကွီး မစီးနိုငျလို့ပါ…”
“ညီမ မပါရငျ အကိုခရီး မသှားခငျြလို့ပါကှာ..”
“ညီမ ကိုယျလကျမအီမသာဖွဈနလေို့ မလိုကျခငျြဘူး အကိုရယျ.. ဪ.. မနေ့လေို့…မနကျဖနျမနကျ ညီမ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားဟငျး ခကျြစားဖို့လညျး ခြိနျးထားသေးတယျ အကို…။”
“လိုကျခဲ့ပါကှာ.. အကိုတဈယောကျထဲ ပငျြးလို့ပါ..”
“သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ခြိနျးပွီးပွီ ဘယျလိုလုပျမလဲ..”
ကိုယျဝနျအရငျ့အမာကွီးနဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးဟာနောကျဆုံးတော့ မလိုကျခငျြပဲ ညကွီးမငျးကွီး ဆိုးလျမွို့မှာ ဈေးဝယျဖို့ လိုကျခဲ့ရတယျ။
ကိုယျဝနျအရငျ့အမာကွီးနဲ့ မိနျးမကို ပငျြးလို့ ည ၉ နာရီ ဈေးဝယျထှကျဖို့ချေါတဲ့ ယောကျြားဖွဈသူ ရီ တဈယောကျတော့ ပြျောရှငျနပေုံရတယျ…။
သူတို့ ဆိုးလျမွို့ကိုရောကျတော့ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနဈ…။
သူမနဲ့ ယောကျြားဖွဈသူ ရီ ဟာ ဈေးဝယျထှကျကွတယျ..။
ကိုယျဝနျအရငျ့အမကွီးနဲ့ မနိုငျမနငျးလမျးလြှောကျနရေပမေယျ့ ကြေးဇူးရှငျယောကျြားအရှမှေ့ာ မကျြနှာတဈခကျြမငွှိုးတဲ့သူမ…။
ပွီးတော့ ရီက သူမကို နာမညျကွီးဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ခေါကျဆှဲပွုတျတဈပှဲကြှေးတယျ..။
စားပွီးသှားတော့ မနကျ ၂ နာရီထိုးနပွေီ…။
အဲဒါဟာ သူမဘဝရဲ့နောကျဆုံးညစာဖွဈခဲ့တယျဆိုတာကိုလညျး သူမ မသိခဲ့ဘူးလေ…။
**************************************သူမ မသိခဲ့တာတှေ သိပျမြားခဲ့တယျ..။
အန်တရာယျရှိတဲ့ အဝေးပွေးလမျးမကွီးမှာ ထိုငျခုံခါးပတျ မပတျပဲအိပျပြျောနပေုံရတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိခငျ… သူမ…။
သူမ နံဘေးမှာတော့ ကားမောငျးနတေဲ့ ယောကျြားဖွဈသူ ရီ.. အဝေးပွေးလမျးမကွီးပျေါမှာ…နှဈယောကျတညျး…။
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးဟာ ကားအရှခေ့နျးမှာ တုတျတုတျမှ မလှုပျ..။
ယောကျြားဖွဈသူ ရီ ကတော့ ထိုငျခုံခါးပတျ အသအေခြာပတျပွီး သတိကွီးစှာကားမောငျးနရေငျးပေါ့….။
အရှိနျနဲ့ ရီ မောငျးလာတဲ့ကားဟာ တညျ့တညျ့မသှားပဲ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ လမျးဘေးဖကျစောငျးပွီး ကို ဦးတညျလာပါလရေော…။
အဲဒီညက သူတို့လငျမယား အိမျကထှကျလာတော့ ည ၉ နာရီထိုးတော့မယျ…။တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အဝေးပွေးလမျးမကွီးတှမှော အရေးပျေါကားပကျြတာမြိုး ၊ ကားမမောငျးနိုငျတာမြိုးတို့ ဖွဈလာရငျ လမျးဘေးအစှနျဖကျမှာ ကားရပျဖို့နရော ( emergency parking strip)တှေ စီစဉျပေးထားလရှေိ့ပါတယျ။
ယောကျြားဖွဈသူ ရီ ဟာ အဲဒီလမျးဘေးမှာရပျထားတဲ့ ၈ တနျလေးတဲ့ ကှနျတိနျနာကားကွီး ကို သူ့ကားနဲ့ ဝငျတိုကျပဈလိုကျတယျ။
အခြိနျက မနကျ ၃ နာရီ ၄၁ မိနဈ ..,။
ထူးထူးဆနျးဆနျး ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးထိုငျနတေဲ့ဘကျက ကားတဈခွမျးပဲ ကှနျတိနျနာကားကွီးနဲ့ ဝငျတိုကျမိတာ….။
ကားမောငျးတဲ့ ရီ ရှိတဲ့တဈခွမျးကတော့ သိပျအထိအခိုကျမရှိ…။
သူမနဲ့ သူမဗိုကျထဲမှာရှိတဲ့ကလေးလေးရှိတဲ့ ကားတခွမျးလုံးဟာ ကှနျတိနျနာအောကျထဲကိုလုံးလုံးဝငျသှားတယျ…။
“၁၁၉ ကပါလားခငျဗြ… ကြှနျတျော ကားမောငျးရငျး အိပျငိုကျသှားလို့ ရပျထားတဲ့ ကားကွီးကို အနောကျကနဝေငျတိုကျမိတာ..ကယျကွပါဦးခငျဗြာ…..”
ကယျဆယျရေးအဖှဲတှရေောကျလာတော့လရီ ဟာ ဝမျးနညျးစှာငိုခလြိုကျတယျ…။
“ကိုယျဝနျနဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ….မိနျးမရေ…အဖွဈဆိုးလှခညျြလား မိနျးမရယျ…မိနျးမဘယျမှာလဲ ရှာပေးပါခငျဗြ…”
သူမကို ကှနျတိနျနာကားအောကျက ခကျခကျခဲခဲ ထုတျယူခဲ့ရတယျ…။
“ကြှနျမတို့ ၁၁၉ အသကျကယျဆယျရေးပါရှငျ့…။ ကြှနျမတို့ ကားရောကျလာတော့ ကားအရှပေို့ငျး တဈခွမျးက ကှနျတိနျနာအောကျကိုရောကျနပေါတယျ။ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးထိုငျနတေဲ့ ဘကျက ကားပွူတငျးပေါကျပှငျ့နပေါတယျ။ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးလကျတဈဖကျက ကားတခါးဘောငျပျေါကနေ အပွငျကိုထှကျနတေယျ…။ကြှနျမ လကျကောကျဝတျကို ဖမျးကိုငျလိုကျတယျ။ တကိုယျလုံးအေးစကျပွီး သနေပေါပွီ…ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှေ အမွနျဆုံးလာပါ…”
ရဲကား.. အရေးပျေါအသကျကယျ ဆေးရုံကား.. သတငျးသမားတှေ အဝေးပွေးလမျးမပျေါ အပွေးရောကျလာကွတယျ။
“အသကျ ၂၄ နှဈရှိတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီးလေးစီးလာတဲ့ကားဟာ အဝေးပွေးလမျးနဘေးမှာ ရပျထားတဲ့ ထရပျကားကို ဝငျတိုကျပွီး သူမဟာ ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးသှားပါတယျ။ ”
“အမြိုးသမီးလေးဟာ အသကျ ၂၄ နှဈအရှယျ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံသူလေးဖွဈပွီး အသကျ ၄၃ နှဈအရှယျ ကိုရီးယားအမြိုးသား ရီ နဲ့ လကျထပျထားသူဖွဈပါတယျ။”
ဒီအကွောငျးဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈ ၈ လပိုငျး ၂၃ ရကျနမှေ့ သတငျးထဲပါလာတယျ။
ယောကျြားဖွဈသူ ရီ ကတော့ ထိခိုကျပှနျးပဲ့ဒါဏျရာ အနညျးငယျပဲရသှားတယျတဲ့….။
****************************************” ကြှနျတျော ရုပျပကျြဆငျးပကျြဖွဈနတေဲ့မိနျးမကို မကွညျ့ရကျဘူး..အမွနျဆုံးသင်ျဂွိုလျခငျြတယျ…”
ရီဟာ နောကျတနကေ့တြော့ သူမအလောငျးကိုခကျြခွငျး မီးသင်ျဂွိုလျလိုကျတယျ..။
သူမ သဆေုံးပွီး ၁၁ ရကျအကွာ…ရီဟာ အသကျအာမခံဌာနကို ဖုနျးဆကျတယျ..။
ကိုယျဝနျ ၇ လနဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ ကားတိုကျမှုနဲ့ သဆေုံးသှားပါပွီ… ဒါကွောငျ့ အသကျအာမခံကွေးလြှောကျထားပါတယျ..”
အသကျ အာမခံအားလုံး ၂၆ ခုဆိုတော့ စုစုပေါငျးရီ ရ မယျ့ငှဟော
“သိနျးပေါငျး ၉ သောငျး ၅ ထောငျ…။”
အသကျအာမခံဌာနက ရဲစခနျးကို ခကျြခငျြး အကွောငျးကွားတယျ။
ဒါဟာ လုပျကွံမှုလေ…။ဘယျသူ့မေးမေး ဒါဟာ လုပျကွံသတျဖွတျမှုပါ…။
ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေ အဲဒီတော့မှ အလနျ့တကွား စုံစမျးကွတယျ…။
အဝေးပွေးလမျးတလြှောကျလုံးက CCTV တှကေိုအားကိုးတကွီးကွညျ့ကွတယျ…။
နားနတေဲ့နရော ( rest area ) ပျေါမှာ ရီ မောငျးလာတဲ့ကားဟာတဈခါရပျသှားပွီး ယောကျြားဖွဈသူက အိမျသာသှားတာတှရေ့တယျ။
ဆီးခဏခဏသှားတတျတဲ့ ကိုယျဝနျဆောငျမိနျးမကတော့ ကားထဲကထှကျလာတာ မတှရေ့…။
သူမဟာ အဲဒီကတညျးက သနေပွေီလား မသင်ျကာစရာ…။
ပွီးတော့…CCTV မှာပျေါနတေဲ့ ရီမောငျးလာသညျ့ကားဟာ ဘယျလိုပဲကွညျ့ကွညျ့ တမငျသကျသကျ ကှနျတိနျနာကွီးကို ဝငျတိုကျနတေယျလေ…။
ရီ မောငျးလာတဲ့ကားဟာ လမျးဘေးဖကျစောငျးပွီး ကိုဦးတညျနရေငျ ဆကျတိုကျ စောငျးပွီးကားတဈခုလုံး ဝငျတိုကျမှာပေါ့…။ရီဟာ ကားကို လမျးဘေးဖကျကို စောငျးပွီးမောငျးနရောက သူထိမှာစိုးလို့ ကားကို ပွနျတညျ့လိုကျတာ CCTV မှာပျေါနတေယျ။
CCTV မှာ ကားထဲက ရီရဲ့မကျြနှာကို သခြောမမွငျရတော့ တကယျအိပျငိုကျ မငိုကျ သကျသပွေလို့မရ..။
“ကြှနျတျော အိပျငိုကျနလေို့ ကားကို စောငျးလိုကျ တညျ့လိုကျ မောငျးနမေိတာဖွဈပါတယျ” ဆိုတာခညျြးပဲ ပွောနတောပေါ့…။
အိပျငိုကျပွီး ကားတိုကျတာကလညျး သူ့ကိုယျသူမထိခိုကျအောငျ မိနျးမဘကျတဈခွမျးတညျး…။
ရဲထောကျလှမျးရေးတှဟော အဲဒီအခကျြအလကျတှကေိုစုပွီး ရီ ကို လူသတျမှုနဲ့ ဖမျးဆီးလိုကျတယျ..။
ကမ်ဘောဒီးယား မိနျးမငယျသဆေုံးသှားပွီး ၃ လအကွာပေါ့…။
ယောကျြားဖွဈသူ ရီ က ဒီလိုပွောတယျ…။
“ကြှနျတေျာ့ မိနျးမနဲ့ကလေး သဆေုံးသှားလို့ သမေတတျခံစားနရေပါတယျ… ကြှနျတေျာ့ကို သံသယဖွဈရကျတယျဗြာ.. ခငျဗြားတို့ လူမဟုတျဘူးလား..?”…တဲ့။
” လူမဟုတျတဲ့သူက ဘယျသူလဲ သိခငျြလို့ပါခငျဗြာ..”
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးသဆေုံးတဲ့ညက အလောငျးကို မီးမသင်ျဂွိုလျခငျ ထုံးစံအတိုငျး ဆေးရုံက ဆေးစဈခဲ့တယျ။ ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေတောငျး ကွညျ့လိုကျတော့
“အစာအိမျထဲ၌ အိပျဆေးကိုတှရေ့သညျ”လို့ ရေးထားတယျ..။
ဒါပမေဲ့ ဘယျလောကျ အိပျဆေး ပမာဏဘယျလောကျအထိရှိသလဲဆိုတာ ထပျစဈခှငျ့မရှိတော့ …။ အလောငျးက မီးသင်ျဂွိုလျလိုကျပွီလေ…။
အဲဒီတုနျးက အသကျအာမခံကွေးအကွောငျးမသိကွသေးတဲ့ ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေ ရိုးရိုးကားတိုကျမှုဆိုပွီး အလေးမထားခဲ့….။
ကိုယျဝနျဆောငျတဈယောကျကို ဆရာဝနျတှဟော အိပျဆေးမပေးဘူးလေ…။
“သူငယျခငျြးက အဖြားပြောကျဆေးသောကျမိလို့ ပထမကိုယျဝနျပကျြကဖြူးတယျ။ အဲဒီတုနျးက သူ မင်ျဂလာဆောငျပွီးတာ ၃ လပဲရှိသေးတာ..။ အခု ဒုတိယကိုယျဝနျမှာ ဆေးဆိုလုံးဝမသောကျပဲ ဝေးဝေးရှောငျနတောပါ။ ကြှနျမ သူငယျခငျြး အိပျဆေးသောကျတယျဆိုတာလုံးဝကို မဖွဈနိုငျဘူး ။တဈယောကျယောကျက အိပျဆေးခတျလိုကျတာပါ..”
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး အလောငျးကို ကယျဆယျရေးဝနျထမျးက ပထမဆုံးထိကိုငျလိုကျတော့ အေးစကျတောငျ့တငျးနတေယျ..။
လူတဈယောကျသဆေုံးသှားပွီးရငျ သှေးတှဟော မလညျပတျတော့တာကွောငျ့ ကိုယျခန်ဓာမှာရှိတဲ့သှေးတှဟော နိမျ့ရာအပိုငျးကို အနညျထိုငျ စုဝေးသှားကွတယျ။ ဒီလိုဖွဈဘို့ ၄ နာရီကွာပါတယျ။
ဥပမာ- အလောငျးက ပကျလကျ အိပျနတေဲ့ပုံစံဆိုပါတော့.. သှေးတှကေ ကွမျးပွငျနဲ့ထိနတေဲ့ ကြောကုနျးဖကျကိုစုတယျ။
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးက ထိုငျနတောဆိုတော့ ခွထေောကျပိုငျးမှာ သှေးတှစေုဝေးလာတယျ။
ကားတိုကျမှုဖွဈတာ ၁၄ မိနဈပဲရှိသေးတဲ့အခြိနျမှာ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးရဲ့ အလောငျး ခွထေောကျပိုငျးမှာ သှေးတှစေုပွီး ညိုမညျးနတောကို ကယျဆယျရေးဝနျထမျးက မသင်ျကာလို ဓာတျပုံရိုကျထားခဲ့တယျ။
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးဟာ ကားတိုကျမှုမဖွဈခငျကတညျးက အသကျမရှိတော့ဘူးလို့ ပညာရှငျတှကေ ခနျ့မှနျးကွတယျ။
ဒါပမေဲ့ အလောငျးကမရှိတော့ … ဓာတျပုံသကျသကေ မခိုငျမာ…။
အသကျအာမခံဋ်ဌာနနဲ့ ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေ အမှုမှနျကိုဖျောထုတျဖို့ ကွိုးစားကွတယျ..။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရီကို ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေ တရားစ စှဲကွတယျ….။
အောကျခွေ တရားရုံးက တရားသူကွီးက သကျသအေထောကျအထား မပွညျ့စုံလို့ အမှုကနေ ကှငျးလုံးကြှတျ တရားသလှေတျပေးလိုကျတယျ။
တောငျကိုရီးယား ဥပဒမှော သကျသဟော သိပျအရေးကွီးပါတယျ။
ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေ လကျမလြှော့…။ ဒီထကျပိုမွငျ့တဲ့ တရားရုံးကို တဆငျ့တကျပွီး တရားစှဲကွပွနျတယျ။
ဒါနဲ့…ရီ ဟာ သမေတတျခံစားနတေယျတဲ့လား…?
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးရဲ့ သူငယျခငျြးတှပွေောတာနဲ့တော့ တလှဲစီ…..။
“အသုဘခမြယျ့နကေ့ ကြှနျမတို့က ဝမျးနညျးလှနျးလို့ ရတေောငျမသောကျနိုငျတဲ့အခြိနျမှာ ရီ က ထမငျးတှေ အားရပါးရစားနတောမြား မွငျလို့တောငျမကောငျးဘူး..”
ဒါကို မယုံလို့ ရီ ကို စိတျပညာရှငျတှကေ စဈဆေးကွညျ့တော့ ရီဟာ ဝမျးနညျးမှုကို လုံးဝမခံစားရပဲ စိတျပြျောရှငျနတောကို တှရေ့တယျ…။
ဒါပမေဲ့ ရီ ရဲ့ပါးစပျကတော့
“သခေငျြတယျဗြာ…မိနျးမနဲ့ကလေးကိုစှနျ့လှတျလိုကျရလို့ သရေပါတော့မယျ.. သူတို့အစား ကြှနျတျောသာ သလေိုကျပါတော့..” မကျြရညျတော့ တဈစကျမှမကြ….။
သူမ အသကျအာမခံ ၂၆ ခုထဲမှာ ကားတောငျမမောငျးတတျတဲ့ သူမအတှကျ မတျောတဆကားတိုကျမှုအသကျအာမခံက ၁၁ ခု …ဒါ ယုတ်တိရှိသလား..။
*************************************ရှိသေးတယျ…။ရီဟာ ကားမောငျးရငျ ဘယျသောအခါမှ ကားထိုငျခုံခါးပိတျကို ပတျလမေ့ရှိဘူးတဲ့…။
အဲဒီနကေ့ ရီရဲ့ကား အဝေးပွေးလမျးမပျေါ စ မောငျးတုနျးက ရီဟာ ထိုငျခုံခါးပတျမပတျထားဘူး။
ရီဟာ ကားတိုကျမှုမဖွဈခငျ ၁ နာရီလောကျအလိုမှာ ထိုငျခုံခါးပတျပတျကိုပတျလိုကျတယျ။
ဒီအခကျြတှကေို ထောကျပွပွီး ရဲထောကျလှမျးရေးတို့က တရားရုံးကိုထပျတကျတာပေါ့…။ဒီတဈခါတော့ တရားသူကွီးက လူသတျမှုဆိုတာ အတညျပွုလိုကျတယျ…။
“မသမေခငျြး အလုပျကွမျးနှငျ့ထောငျဒါဏျ”…လို့ အပွဈခလြိုကျတယျ။
ကဲ…သူမြားသမီးပြိုကို သတျပဈဖို့ ချေါယူလာတဲ့ လူယုတျမာ.. ကိုယျ့ရငျသှေးကို ရကျရကျစကျစကျသတျပဈတဲ့လူမဆနျသူ…။
ထောငျထဲမှာ သတေဲ့အထိအပွဈခံပတေော့..လို့ တောငျကိုရီးယားပွညျသူတှေ ဝမျးသာကွပွနျတယျ..။
ရီကလညျး ဒီအတိုငျးနမေလား…. အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးကိုတကျပွီး အယူခံဝငျပွနျတယျ..။
ဒါဟာ သူ့အတှကျ နောကျဆုံးအခှငျ့အရေးလေ…။ သဌေးဖွဈမလား ..ခှေးဖွဈမလား….။
ဒီလိုနဲ့ တရားစီရငျမယျ့ နောကျဆုံးနကေို့ ရောကျလာခဲ့တယျ…။
၂၀၁၇ ခုနှဈ ၅ လပိုငျး ၃၁ရကျနေ့
တရားသူကွီးက ရီကို သဒေါဏျပေးခငျြလောကျအောငျ ရှံရှာပမေဲ့ သကျသအေလှနျအားနညျးတာကွောငျ့ အမှုက ကှငျးလုံးကြှတျ တရားသေ လှတျပေးလိုကျတယျ…။
ရီတို့မိသားစုဟာ သူတို့တဈသကျလုံးသာမက မွေးတှမွေဈတှပေါ ထိုငျစားလို့ မကုနျနိုငျတဲ့ငှတှေရေသှားတယျ..။
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေး နဲ့ ဗိုကျထဲကလေးလေးကတော့ သပေေးလိုကျရတယျ။
ဒီလို…ဒီဇာတျလမျးရဲ့ နိဂုံးဟာ “သိနျးပေါငျး ၉ သောငျး ၅ ထောငျအတှကျ တနျဖိုးရှိသညျ့အသကျ နှဈခြောငျး ရကျရကျစကျစကျ စတေးလိုကျသညျ..” ပေါ့…။
သူမ သိပျရောကျဖူးခငျြတဲ့ တောငျကိုရီးယားမှာသူမ ၆ နှဈနီးပါးနလေိုကျရတယျ…. ။
KPOP..?လကျတှမှေ့ာတော့ TV ကလာတဲ့ KPOP တှကေိုတောငျ နားထောငျဖို့ ကွညျ့ဖို့ အခြိနျမရခဲ့…။
အပိုငျးဆကျ ဒရမျမာတှဆေို ဝေးသေး…။
ရီ့ကလေးကို သူမကလေးလို အနှံအတာခံပွီး .. အလုပျတှနေဲ့ အမွဲလုပျနတေဲ့သူမ…။
သူမ မိဘတှကေို ငှပေို့ပေးတတျလို့ ကြေးဇူးရှငျ ဆိုပွီး ယောကျြားကို နတျတဈပါးလို ကိုးကှယျခဲ့တဲ့သူမ..,။
မိဘကို လှမျးဆှေးတမျးတလှနျးလို့ လူမသိ သူမသိငိုကွှေးမိတဲ့နတှေ့မှောတော့ မကျြရညျတှနေဲ့ သူမ…။
အခြိနျတနျတော့ ရီက သူမကို အသကျရှငျခှငျ့မပေးတော့ဘူး….။
သူမ သိပျခဈြရတဲ့ရငျသှေးလေးနဲ့အတူ တောငျကိုရီးယားရဲ့ အဝေးပွေးလမျးမပျေါမှာ ဒီလို ပကျပကျစကျစကျသခေဲ့ရပွီ..။
တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသံရုံးဝနျထမျးတှဟော အတျော ခံပွငျးကွတယျ။
အဲဒီအခြိနျကစပွီး ၉၉% ကမ်ဘောဒီးယား အမြိုးသမီးတှေ တောငျကိုရီးယားအမြိုးသားတှနေဲ့ လကျမထပျကွတော့ဘူး…။
ကမ်ဘောဒီးယားတဈနိုငျငံလုံး စိတျမကောငျးပမေဲ့ ဘာတတျနိုငျမှာတဲ့လဲ..။
တောငျကိုရီးယားနဲ့ ကမ်ဘောဒီးယား စဈဖွဈကွမှာလား..?
ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးအတှကျ အမှုစဈတာဝနျကတြဲ့ တောငျကိုရီးယား ရဲထောကျလှမျးရေးတှကေ တကယျ့ကို အစှမျးကုနျကွိုးစားပေးခဲ့ပါတယျ။
အသကျအာမခံဌာနကလညျး အရှုံးပျေါပွီမို့ ဒီအမှုကို အမှနျအတိုငျးဖွဈဖို့ အလှတျစုံထောကျတှနေဲ့ အမြိုးမြိုးစုံစမျးကွတယျ။
တရားသူကွီးကလညျး နိုငျငံတကာကပို့တဲ့ ” တရားမြှတပါ..” ဆိုတဲ့စာတှကွေားမှာ မနညျးဆုံးဖွတျခဲ့ရတယျ။ဘယျသူမှ မတတျနိုငျ…။ရီ ဟာ အကှကျစလှေ့တယျ..။
ဒါဟာ လူသတျမှုလား လူသမှေုလားလို့ အနားကဖွတျသှားတဲ့ခှေးလေးတဈကောငျကို မေးကွညျ့ရငျတောငျ သိဦးမယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီနိုငျငံရဲ့ဥပဒအေရ သကျသမေရှိရငျ ဘာမှဖွဈမလာဘူးလေ…။
SBS ရုပျမွငျသံကွားကတော့ ဒီအမှုကို အခုအခြိနျအထိ လကျမလြှော့သေးပဲ ကွိုးစားနဆေဲ…။
ဒါပမေဲ့ အမွငျ့ဆုံးတရားရုံးက အမိနျ့ခပြွီးပွီဆိုရငျတော့ မြှျောလငျ့ခကျြမရှိတော့ပွီ…။
သူမကို ဘာလို့ကိုယျဝနျရှိလာမှ သတျတာလဲ…..?
တောငျကိုရီးယား ဥပဒအေရ ကိုယျဝနျရှိလာမှ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးက ကိုရီးယား နိုငျငံသားကဒျ အမွနျရတယျလေ..။
ဒီလိုနိုငျငံသားကဒျရတော့ရီဟာ ပိုကျဆံအရဆုံး AD&D အသကျအာမခံ ထားလို့ရခဲ့တာပေါ့…။
ဒါဟာ နှဈရှညျ စီမံကိနျးတဈခု…။ရီ စောငျ့နိုငျပါတယျ…,၁၈ နှဈသမီးပြိုလေးနဲ့ ၆ နှဈပေါငျးခဲ့ရတာ နညျးတဲ့အမွတျလား..။အိမျအလုပျတှလေညျးကူလုပျသေးတယျ..။ကလေးအတှကျလညျး အိမျအကူတဈယောကျ ငှပေေးပွီးငှားမယျ့အစား ဒီပိုကျဆံကို သူမ မိသားစုထောကျပံ့တော့ ကြေးဇူးတောငျ အတငျခံရသေး…။နောကျဆုံး တဈသကျစားမကုနျတဲ့ငှတှေေ အသကျနဲ့လဲပွီး ပုံပေးသှားခဲ့တဲ့ မိနျးမလေ…။အတေျာ့ကို ဟနျကခြဲ့တာပေါ့..။
ငှဟော သကျရှိလူသားတှရေဲ့ အသကျတှကေို လမျးပျေါက အမှိုကျစလေးတှလေိုပွောငျးလဲပဈခဲ့တယျ..။
အသကျအာမခံကွေးကွောငျ့ ကိုရီးယားမှာ၊ဂပြနျမှာ သူတို့လူမြိုးအခငျြးခငျြးတောငျ အမြိုးမြိုးလှညျ့ပတျပွီးသတျနကွေပါတယျ။
သကျပြောကျ အသကျအာမခံကွေးဆိုတာ ကနျြရဈသူမိသားစုမှ လကျခံရရှိတာမို့ မိသားစုအခငျြးခငျြး သတျဖွတျမှုတှဖွေဈလာတယျ။
ဒါကွောငျ့ လကျထပျပွီး တျောစပျလာတဲ သှေးမစပျ မိသားစုဝငျအသဈတှကေတော့ အန်တရာယျအမြားဆုံးပေါ့…။
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံဟာ ခမျြးသာတဲ့နိုငျငံတဈခု မဟုတျတဲ့အတှကျ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးတှအေပါအဝငျ အရှတေို့ငျးသူလေးတှအေမြားစုဟာ အသကျအာမခံကွေးဆိုတာ ဘာမှနျးတောငျမသိကွပါဘူး။
ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ မွို့ကွီးပွကွီးမှာနတေဲ့သူတှတေောငျ တျောတျောဗဟုသုတရှိမှသိတာပါ။
ဒီလို ဘာမှ မသိရှာတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူကလေးကိုမှ ပဈမှတျထားပွီး သတျပဈဖို့ရှေးခယျြခဲ့တဲ့လူယုတျမာ…။
ဈေးထဲက ငါးအရှငျလတျလတျကို ခုတျထဈရောငျးစားပွီး ပိုကျဆံရှာတာနဲ့ ဘာထူးလို့လဲ..။
“မငျးလို လူမဆနျတဲ့သူတှကွေောငျ့ ငါတို့တိုငျးပွညျ နာမညျပကျြတာ..” တဲ့
ဒီအကွောငျးကို တောငျကိုရီးယား သတငျးဆောငျးပါးတှမှော blog တှမှော ဒေါသဖွဈပွီး ရေးကွတယျ…။
စိတျကောငျးရှိတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားနိုငျငံ နယျမွို့လေးက သူမရဲ့ မိဘနှဈပါးကတော့ ဒီလို ငှကွေောငျ့ လူအခငျြးခငျြးသတျဖွတျကွတယျဆိုတာကွားတောငျ မကွားဖူးကွလို့ မယုံကွဘူးလေ..။
သူတို့ကို ဘယျလိုရှငျးပွပွ အသကျအာမခံဆိုတာဘာလဲဆိုတာတောငျ နားမလညျကွဘူး။
“သမီးလေးနဲ့မွေး သဆေုံးသှားလို့ ငါတို့သားသမကျလေး စိတျမကောငျးဖွဈနရှောမှာပဲ…. ”
“ငါတို့ ကမ်ဘောဒီးယားသံရုံးက ဒီလိုစှပျစှဲတာ ဘယျကောငျးပါ့မလဲ…မဟုတျရငျ အားနာစရာကွီး…”
” သား သမကျလေး နမှေကောငျးရဲ့လား..” တဲ့…။
ဒါပမေဲ့ တောငျကိုရီးယားမှာနခေငျြတဲ့ ကမ်ဘောဒီးယားသူလေးနဲ့ လူမဖွဈလိုကျရတဲ့ သားလေးကတော့ တမလှနျဘဝကနေ လောကကွီးကို စိတျနာနလေမေလား….။
Credit: မရှမေိုး ( ကိုရီးယား )
မီး က ရှေ့ ကေ န သတ် တယ်။ နော က် ကေ န လှိုက် လှို က်ပြီး ပြန်ပြန်ေ လာင်ေ န တယ်” – ထိန်ပင် အ မှို က် ပုံ မီးငြှိမ်း သတ် ရာ မှာ ပါဝ င် သည့် မီး သတ် သ မား တဦး ၏ ပြောကြား ချက်
“ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနက အလုပ်ရှင်များနှင့် ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအား သတိပေး”᠌᠌᠌
ဆိုင်ကယ်ပျော က် ဆုံးသူ များ ကိုယ့် ဆိုင်ကယ် ပါ မ ပါ မန္တလေး အမှတ်၈ ရဲစခန်း မှာ လာရောက်ကြည့်ကြ ပါ